उद्यमका उल्झन- विचार - कान्तिपुर समाचार
गीता तिवारी (गौतम)
कुनै उद्योग–व्यवसाय गर्न खोज्दा महिलाले झेल्नुपर्ने अड्चन अनेक छन्– परिवारको अनुमति, पुँजी, ऋण, परामर्श, समय व्यवस्थापन आदि ।
श्रावण २५, २०७५ गीता तिवारी (गौतम)
काठमाडौँ — ‘यत्रो डिग्री पढेर पनि पसल !’ सुरु–सुरुमा मान्छेहरू यसो भन्दै मेरो खिल्ली उडाउँथे, ‘पढेपछि जागिर पो खानुपर्छ त !’ जागिर पनि मैले नखाएकी होइन, स्कुल पढाउँथें । तर आफैं केही गर्ने सोच बनाएर पसल खोलेकी थिएँ ।
यस्ता टिप्पणीहरू लामै समय आइरहे, तर म त्यसलाई प्रवाह नगरी अगाडि बढिरहें । अहिले व्यवसाय त छँदै छ, सानोतिनो उद्योग पनि सुरु गरेकी छु । केहीले रोजगार पनि पाएका छन् । आफू त सन्तुष्ट छँदै छु, हिजो कुरा काट्नेहरू पनि दंग छन् ।
मेरो कथा एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । पछिल्लो समय देशको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा बोकेको निजी क्षेत्रमा महिलाहरू उत्साहपूर्वक आइरहेका छन् । उद्यमी–व्यवसायी भई स्वरोजगारमात्र होइन, रोजगारदाता पनि बनिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा उनीहरूको संख्या बढ्नु आर्थिकमात्र नभई सामाजिक विकासको समेत द्योतक हो । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताले जेलिइरहेको देशमा उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्नु र त्यसलाई दिगो बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । तैपनि केही महिला आफ्ना घरायसी कामकाजलाई व्यवस्थापन गर्दै सानातिना व्यापार व्यवसायदेखि ठूला औद्योगिक क्षेत्रमा लागेका छन् । पढे–लेखेका पनि । तर कति सहज छ त महिलालाई उद्यमी/व्यवसायी बन्न ?
घर परिवार व्यवस्थापन गर्दै बाहिर काम गर्न निस्कनु महिलाका लागि दोहोरो–तेहोरो भूमिका निर्वाह गर्न हिम्मत जुटाउनु हो । जुनसुकै काममा अगाडि बढ्न सबभन्दा पहिले दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । दृढ इच्छाशक्ति र कामप्रतिको लगाव सफलताको कडी हो । जुनसुकै व्यवसाय वा उद्योग सञ्चालन गर्न पुँजी त अपरिहार्य भइहाल्यो । शताब्दीयौंदेखि पछाडि परेका महिला आर्थिक रूपमा सक्षम हुने कुरै भएन । अपवाद बाहेक उनीहरूको नाममा कुनै सम्पत्ति हुँदैन । सम्पत्तिमा पहुँच नभएपछि कसरी लगानी गर्न सकिन्छ ? घरपरिवारले विश्वास गरेर उनीहरूलाई लगानी गर्ने ठूलो रकमको व्यवस्था मिलाइदिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । आफ्नो नाममा कुनै सम्पत्ति नहुनाले बैंक वा केही धितो राखेर कर्जा लिन पनि महिलालाई कठिन छ । तसर्थ उद्योग वा व्यवसायमा महिलाका लागि प्रवेशद्वारमै आर्थिक पाटो ठूलो चुनौती बनेको छ ।
प्राय: परिवारले महिलाहरू बाहिर काम गर्न जाँदा घर अस्तव्यस्त हुन्छ भन्ठान्छन् । हुन पनि महिलाले करिब १८–२० घन्टा नै घरमा काम गर्छन् । तर आर्थिक दृष्टिले घरका कामको कुनै मूल्य गनिँदैन । काममा जाँदा घरायसी काम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ नै । त्यही भएरै छोरीले उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा बुबाआमा, दाजुभाइ ‘अब किन खोल्नुपर्‍यो, बिहे गरेर घरजम गरेर बसे भैहाल्छ नि’ भन्छन् । अति नै जिद्दी गरे खै कहाँ छ पैसा भनेर टक्टकिन्छन् । विभिन्न सामाजिक अप्ठ्यारा अगाडि तेस्र्याउँछन् । छोरीलाई त यति चुनौती तेर्सिन्छ भने बुहारीलाई कति गाह्रो होला ? घरका सम्पूर्ण सदस्यको मन जितेर र आउनसक्ने समस्याको विकल्प खोजेर मात्रै एउटी महिला घरबाट पसल वा उद्योगसम्म पुग्नुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा हारगुहार गर्दा पनि उनीहरूले ऋण पाउन सक्दैनन् । कि ससुरा कि श्रीमानको नै मुख ताक्नुपर्छ वा आमाबुबा, दाजुभाइको । यसरी व्यवसायमा लगानी गर्ने पहिलो पुँजी जुटाउनै उनीहरूलाई फलामे चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ ।
बल्ल–बल्ल घरबाट अनुमति पाएर केही लगानीको वातावरण मिलिहाले पनि व्यवसाय छनोट गर्न कहीं कतै परामर्श गर्ने ठाउँ छैन । हाम्रो देशमा त्यस्ता परामर्श केन्द्र भएको मलाई जानकारी छैन । कसैबाट सुझाव, सल्लाह पाउन सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारसँग सामाजिक वृत्तमा महिलाको हेलमेल हुँदैन । त्यसैले अँध्यारोमा ढुङ्गा फालेसरह व्यवसायमा हात हाल्नुपर्ने स्थिति छ । उद्योग व्यवसायी महिलाका लागि अर्काे चुनौती रुढीवादी सामाजिक परिवेश हो । महिलाले उद्योग व्यवसायमा सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसको सिलसिलामा बाहिर हिँडडुल गर्नुपर्छ । विभिन्न मान्छेसँग कारोबार गर्नुपर्छ । कहिले बाहिर त कहिले कार्यस्थलमै ढिलोसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ । रात–साँझ भन्न पाइँदैन । हाम्रो समाजले अझै यस्ता कुरालाई सहज रूपमा लिन सकिरहेको छैन । तर पुरुष व्यवसायी या उद्योगीले निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्छ ।
आजको प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको बजारमा सफलताको लागि अत्यधिक श्रम, ऊर्जाका साथै व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार आवश्यक पर्छ । नयाँ–नयाँ वस्तु उत्पादन, प्याकेजिङ र लेबलिङदेखि उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन इन्टरनेटले सघाउँछ । महिलाले यसको भरपुर उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । परम्परागत प्रणालीभन्दा माथि उठेर व्यवसाय वा उद्योगमा आफ्नो ज्ञान, सीप दक्षता र क्षमता वृद्धि गर्दै काम गरेमा महिला पनि सफल उद्यमी बन्न सक्छन् ।
एउटी महिला आत्मनिर्भर हुनु घर, परिवार र समाजकै लागि सुन्दर पक्ष हो । परिवारको अर्थतन्त्र मजबुद हुँदै जाँदा समृद्धिको ढोका पनि खुल्छ । तसर्थ महिलाहरू अरुको १०–१५ हजार रुपैयाँको जागिर खोज्न भौंतारिनुभन्दा स्वरोजगार भई स्वावलम्बी बन्न उत्साही हुनुपर्छ । महिलाका लागि कृषि, पर्यटन, हस्तकला निर्माण, सेवामूलक व्यवसाय, होमस्टे, साना तथा घरेलु उद्यम, परम्परागत संस्कृति सम्बद्र्धन, यातायात, स्कुल तथा शैक्षिक संस्थाहरू, निर्माण व्यवसाय, आयात–निर्यात, फेसन डिजाइन, हस्पिट्यालिटी जस्ता सम्भावनाका अनेक क्षेत्र छन् ।
कुनै महिला स्वोजगार बन्छु भन्दा उसलाई हावामा उडाइदिने प्रवृत्ति छ । तर यस्तो सोच भएकालाई घरपरिवारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । व्यवसाय, स्थान छनोटसम्म सहयोग गर्नुपर्छ । पुँजी लगानी गर्न सघाउनुपर्छ । सरकार विभिन्न शीर्षकमा कनिका छरेझैं पैसा बाँड्छ । तर महिलाको जीवनस्तर उकास्न ठोस कार्य गर्न सकिरहेको छैन । उद्यम/व्यवसाय गर्न चाहने महिलालाई विना धितो सहुलियत व्याजमा कर्जा लगानी गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई निश्चित ब्याजमा कर्जा दिने भनिए पनि त्यो प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो छ । व्यवसायको प्रकृति हेरेर कम व्याजमा कर्जा दिने हो भने अहिलेका शैक्षिक बेरोजगार धेरै महिला उद्यमतर्फ आकर्षित हुन्थे ।
हाम्रो अचम्मको बानी छ– कसैले एउटा काम गर्‍यो भने अरुले पनि त्यही गर्ने । त्यसको सम्भावना नबुझीकन बाहिरबाट देखेका भरमा काम गरेर उन्नति सम्भव छैन । व्यवसायी वा उद्योगी बन्न चाहनेलाई उचित परामर्श जरुरी पर्छ । त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा उद्योग/व्यवसायका लागि परामर्श केन्द्र खोलिनुपर्छ ।
उद्योग/व्यवसायमा जोखिम र चुनौतीमात्र छैन, अनन्त सम्भावना पनि छ । यस क्षेत्रमा आएका महिलाले आत्मसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गरी अरुका लागि उदाहरण बनेका अनेक दृष्टान्त छन् । राज्य र सरोकारका निकायहरूबाट उत्प्रेरणा जगाउने खालका कार्यक्रमहरू आउने हो भने पक्कै पनि महिलाहरू आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । कुनै प्राविधिक ज्ञानविना विदेश गएर पसिना बगाइरहेका महिला आफ्नै देशमा फर्केर आय आर्जनका काम गर्न सक्छन् । शिक्षित भएर पनि बेरोजगार बस्नुपरेका महिला आफ्नो ज्ञान–सीपलाई परिमार्जन गर्दै यही देशमा उद्यमी व्यवसायी बनेर राज्यलाई कर तिर्दै स्वावलम्बी बन्न सक्छन् ।
लेखक पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी कार्यसमिति सदस्य हुन् ।
tiwarigita41@gmail.com प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
आमा स्वैच्छिक, बाबु अनिवार्य
श्रावण २५, २०७५ सम्पादकीय
काठमाडौँ — जन्माउने आमा, नागरिकता दिने बाबु । हंस दिने आमा, वंश दिने बाबु । आमा थाहा नभए पनि हुन्छ, बाबुचाहिँ प्रशासनमा हाजिर हुनुपर्छ, आफैं उपस्थित हुन नसके नागरिकता वा पहिचान खुलेको पत्रको प्रतिलिपि पठाउनुपर्छ । आमा स्वैच्छिक, बाबु अनिवार्य ।
जबकि पहिचान उल्टो हुनुपर्ने होइन र ? बाबु स्वैच्छिक, आमा अनिवार्य । नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसके आमा वा सन्तानले पुस्ट्याइँ पेस गरे मात्रै नागरिकता दिने भनिएको छ । त्यसमा घुसाइएको सबभन्दा छुच्चो प्रावधान छ, ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजकी आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।’
यो व्यवस्थाले श्रीमान्बाट छुटेका महिला, विधवा, बिहे नगरी बच्चा जन्माउने र बलात्कारबाट जन्माउन बाध्य महिलाहरू सबभन्दा मर्कामा पर्नेछन् । तिनका सन्तान नागरिकताविहीन हुनेछन् । बाबु नभए अनागरिक । बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूले बोक्नुपर्नेछ । यस हिसाबमा आमाले आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पतिको पहिचान अनिवार्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था फेरि ब्युँताइएको छ ।
पुरुष र महिला एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने नीतिवचन पढेर कानुनको मस्यौदा गर्नेहरू नागरिक समानता र सम्मानको रथ ढाल्न पाखुरा खिच्दै छन् । लिंगका आधारमा कसैलाई विभेद गरिनेछैन भनेर आफैंले कोरेका संविधानका अक्षर उप्काउन तम्सिँदै छन् ।
संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ मा लिंगका आधारमा भेदभाव नगर्ने भनिएको छ । धारा ३८ को महिलाको हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने लेखिएको छ । धारा ३८ को उपधारा (६) मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयकअनुसार कानुन बनेमा प्रेम विवाह गरेका अथवा लिभिङ टुगेदर बस्दा गर्भ रहेपछि पुरुषले छाडेका महिलाका सन्तान प्रभावित हुनेछन् । विधवाका सन्तान सताइनेछन् । देशको कोही पनि नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्दैन । संविधानको धारा १२ मा प्रस्ट अक्षरमा लेखिएकै छ, ‘वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।’
अदालतले पनि आमाका नामबाट सन्ततिलाई नागरिकता दिने फैसला विभिन्न समयमा गरिसकेको छ । सन्तानले नागरिकता लिने बखत बाबु वा आमामध्ये एकजना नेपाली नागरिक भए पुग्छ । आमाका नामबाट धेरैले नागरिकता लिइसकेका पनि छन् । महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी छन् भने तिनका छोराछोरीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने भनिएको छ । यो सीडीओ कार्यालयबाट दिइँदैन । गृह मन्त्रालयमा बोलाएर धेरै सोधीखोजी गरिन्छ ।
पुरुष नागरिकता र महिला नागरिकतालाई फरक व्यवहार गर्नु आफैंमा विभेदकारी हो । विदेशी बाबु भएको अवस्थामा सन्तानले बाबुको देशको नागरिकता नलिएको घोषणा गरेपछि अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् । नागरिकता कानुन जहिल्यै घुमाउरो बन्छ । आमाका नामबाट नागरिकता दिन प्रशासकहरू हच्किन्छन् । नक्कली पर्ला भनेर पनि तर्सिन्छन् । त्यसकारण संविधानले जुन किटानीसाथ कुनै विभेद नगर्ने प्रस्ट गर्‍यो, त्यत्तिकै प्रस्टता कानुनमा अंकित हुन जरुरी हुन्छ ताकि प्रशासकहरूले कानुनका नौ सिङ देखाउन नसकून् ।
आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसविपरीत हुने गरी ऐन संशोधन गर्न मिल्दैन । संविधानमा दिने, कानुनमा खिच्ने प्रवृत्ति जारी छ । यसले संविधानभन्दा कानुन ठूलो बनाउँछ र कानुनभन्दा प्रशासनका प्रक्रिया जटिल । निर्धा, निमुखा नागरिक फेरि पनि कहिले कानुनका नाममा त कहिले कागजका नाममा निरुपाय भइरहनेछन् । नागरिकताबाटै नागरिक अधिकार सुरु हुन्छ ।